Konjac dia karazana sakafo novokarina tany atsimon'i Sina. Konjac dia sakafo alkaline mahasoa, izay afaka mampihena ny fanaintainan'ireo izay mihinana sakafo be asidra be loatra. Rehefa miara-mihinana konjac dia afaka mahavita mandanjalanja ny asidra sy ny alkali ao amin'ny vatana, izay mahasoa ny fahasalaman'ny olombelona. Nanomboka namboly konjac i Sina 2 000 taona lasa izay, ary taty aoriana dia niparitaka tany Japon, izay nanjary iray amin'ireo sakafo ankafizin'ny olona indrindra. Misy karazana konjac maro, amin'ny toerana maro eto amin'ny firenentsika dia misy ...
Ny tsaramaso dia manondro ny ahitra sy ny zava-manitra indrindra. Ny ahitra dia ravin'ny zavamaniry isan-karazany. Izy ireo dia mety ho vaovao, maina rivotra na tany. Ny zava-manitra dia ny voa, tsimoka, voankazo, voninkazo, hodi-kazo ary ny fakan'ny zavamaniry. Manana tsiro mahery vaika kokoa ny zava-manitra noho ny lavanila. Amin'ny tranga sasany, ny zavamaniry dia azo ampiasaina hamokarana anana sy zava-manitra. Ny fofona sasany dia namboarina tamin'ny fitambaran'ireo zava-manitra marobe (toy ny paprika) na avy amin'ny fitambaran'ahitra (toy ny kitapo misy tsiro). Ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, fandrahoan-tsakafo ary fikarakarana sakafo, ...
Ny legioma volo dia karazana sakafo mangatsiaka, izay fonosana kely vita amin'ny legioma vaovao toy ny dipoavatra, voatabia, tsaramaso ary kôkômbra amin'ny hafanana ambany indrindra ary faran'izay haingana aorian'ny fikarakarana.